Miaro ny tenin-drazan’izy ireo amin’ny fampiasana sarimiaina ireo mpamorona sarimiaina Afrikanina · Global Voices teny Malagasy
Sarimiaina efatra noforonin'ny Afrikanina no handeha amin'ny sehatra ao Etazonia
Voadika ny 30 Aogositra 2021 9:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Português, عربي, Italiano, English
Nopihana tamin'ny YouTube an'ny CMR KIDS TV, fantsom-pahitalavitra iray ao amin'ny YouTube izay mampianatra ny tanora Kameroney momba ny kolontsainy sy ny tantarany ary koa ireo fiteny tahaka ny Ewondo sy Dioula.
Nanambara tamin'ny volana lasa teo ny Disney+ sy Cartoon Network, sehatra sarimiaina roa lehibe Amerikana fa hamoaka vokatra efatra avy amin'ireo mpamorona Afrikanina izy ireo. Izany dia mitovy amin'ny fanambaràna avy amin'ny goavamben'ny fandefasan-tsarimihetsika mivantana toa ny Netflix sy Youtube Originals, izay maneho fangatahana fisoloantena sy fitantarana vokatry ny tany eo amin'ireo mpihaino Afrikanina noho ny firoboroboan'ny tsena manerantany momba ny votoatin-tsarimiaina.
“Kizazi Moto” (midika hoe Afo Taranaka amin'ny teny Swahili) no famokarana vaovao voalohany, angon-tsarimiaina misy fizarana 10 avy amin'ilay horonantsary antôlôjia Afro-futurista izay manavatsava ny hoavin'i Afrika. Hisy tantaran'ireo mpamorona avy amin'ny firenena afrikanina enina izany. Ny faharoa, “Kiya and the Kimoja Heroes” no andiany alohan'ny fidirana an-tsekoly izay miompana amin'ny zazavavy afrikanina 7 taona tia haidihy sy haiady. Rehefa nametraka ny fehiloha kristaly mahagaga izy sy ny namany akaiky roa, dia lasa maherifo vonona hiaro ny vondrom-piarahamonin'izy ireo izy ireo. “Kiff,” hatsikana iray an-tsary mihetsika 2D avy amin'ireo mpamorona Afrikanina Tatsimo Miresaka momba ny atsidy vazaha iray be fanantenana sy bitro malemy. Ary farany, “Garbage Boy and Trash Can,” andiana hatsikana maherifo lehibe farany an'ny Cartoon Network Africa izay miresaka momba ny zazalahy iray manana hery mahery vaika an-tsaina miady ho amin'ny fahamarinana miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy matoky.
#KizaziMotoGenerationFire, Andiany Orizinaly tena vaovao, mitondra sarimiaina foronina manaitra an'i #DisneyPlus amin'ny taona 2022. pic.twitter.com/QrngmfUbLg
Na dia fandresena lehibe aza izany fisoloantena izany, dia maro ireo fangatahana fisoloantena avy amin'ireo mpanao sarimiaina Afrikanina mba hananana mpilalao mitovy azy ireo fotsiny. Nanjary fitaovana fitehirizana ireo fiteny Afrikana tandindomin-doza ihany koa ny sarimiaina. Amin'ny alàlan'ny fialamboly, manantena ireto mpamorona ireto fa hampiasa ny sarimiaina ho fitaovam-piampitàna ireo angano, filozofia, fomban-drazana manankarena, fitenenana ara-kolontsaina ary fiteny Afrikanina.
Fiteny Afrikanina 300 mahery no tandindonin-doza
Manana ny ampahatelon'ny fiteny velona manerantany 7000 eo ho eo ny kaontinanta Afrikanina. Noho ny fanjakazakan'ny fiteny iraisam-pirenena toa ny fiteny anglisy sy frantsay, tandindonin-doza hatrany fiteny teratany.
Tamin'ny taona 2018, nitatitra ny UNESCO fa fiteny Afrikana maherin'ny 300 no tandindonin-doza ary mihoatra ny 52 no fongana. Nilaza ihany koa ny tatitra fa raha tsy ampianarina ireo fiteny ireo ny tanora, dia mety ho maro kokoa ny lany tamingana. Amin'ireo fiteny 230 manerana izao tontolo izao izay fongana nanomboka tamin'ny 1950, tany Afrika ny 37.
Araka ny lahatsoratra iray avy amin'ny Quartz miresaka momba ny Yakunte – fiteny efa ho faty any Kenya izay olona fito fotsiny sisa no mampiasa azy, ary maherin'ny 70 taona avokoa – marefo indrindra ny fiteny afrikanina satria mametraka fiteny ofisialy ny governemanta ary mampahakivy ny eo an-toerana, amin'ny fanantenana hamolavola mari-panondroam-pirenena tafaray kokoa.
Na eo aza ny fimaroan'ny fiteny avo, ny teny anglisy sy ny teny Frantsay, fiteny iraisam-pirenena no tena fiteny ofisialy manjakazaka ho an'ny ankamaroan'ny fanjakana afrikanina. Somali, Berber, Wolof, Oromo, Igbo, Swahili, Hausa, Fulani, Fulani, ary Yoruba no fiteny Afrikanina ampiasain'ny olona ampolony tapitrisa mba heverina ho (fiteny) eo an-toerana ary vitsivitsy ihany no ofisialy eo amin'ny sehatra nasionaly.
Afaka manova an'ity fironana ity ve ny mpamorona sarimiaina Afrikanina?
Fiteny Afrikanina amin'ny Sarimiaina
Na dia fiteny manjaka eo amin'ny tsenan'ny sarimiaina manerantany aza ny teny Anglisy, indrindra noho ny fahitana ny Disney hatraiza hatraiza, nahazo ny toerany ho fiteny hafa mahasolotena ho an'ny mpihaino Afrikana ny Kiswahili.
Ny sarimihetsika Disney 1994 “The Lion King” angamba no sarimihetsika tandrefana malaza indrindra mampiseho ny Kiswahili araka ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny fampiasana (diso) ny Kiswahili eo amin'ny kolontsaina Tandrefana malaza” avy amin'ny ThisisAfrica. Nanomboka teo dia nanandratra ny satan'ny Kiswahili ho fiteny Afrikana miroso ho amin'ny sarimiaina miteny afrikana ireo andian-tsarimihetsika Disney mitondra ny lohateny hoe “Lion Guard” (naseho voalohany tamin'ny 2015) .
Nanomboka teo, dia nanohy nampiditra tamim-pahombiazana ny Kiswahili tamin'ny resadresaka momba ny famokarany, ny sarimihetsika miaina, na ireo lohateny an'andiany ireo mpamorona sarimiaina Afrikanina. Anisan'izy ireny ny “Super Sema” — andian-tsarimiaina maherifo lehibe voalohany ho an'ny ankizy any Afrika izay niaraha-notontosaina tamin'ilay Kenyana Lupita Nyong'o; ny “Akili & Me” novokarin'ny Ubongo Kids; ary ny “My Better World.”
Navoaka tamin'ny volana martsa 2021 ny #SuperSema ary tena manome aingam-panahy, fanabeazana, ary votoaty mahafinaritra ho an'ny ankizy rehetra. Azo jerena ao amin'ny #YouTube ny tantara mampiseho an'i @lupitanyongo toy ny Mama Dunia.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny litnet.co.za, nilaza toy izao i Chris Morgan, mpanorina sy talen'ny famoronana ao amin'ny Fundi Films, ary mpamokatra ny andian-tantara “My Better World” :
Na eo aza ny tsy fahampian'ny hirika fampiofanana ofisialy, dia efa manomboka mivoaka ireo vokatra vita eto an-toerana. Zava-dehibe ny manana ny tena fahasamihafana eo amin'ny toetrantsika mba hahafahan'ireo andian-tantara miasa ao amin'ny faritra samihafa ao amin'ny kaontinanta. Nodinihinay ireo dingana tsirairay amin'ny fivoaran'ireo ekipa any Ghana, Nizeria ary Kenya – ireny fandinihana ireny no nitari-dalana anay amin'ny fizotran'ny fanoratana ny fandehan'ny tantara (script).
Sarimiaina malaza sasany mampianatra fiteny Afrikanina
Fomba iray mahomby hampianarana ireo tanora Afrikanina momba ireo fahaiza-manao sy fiteny izay matetika tsy ampianarina any an-tsekoly ny sarimiaina. Maro ny sarimiaina mampiseho fanantenana hameno ity banga ity.
Avy any Afrika Andrefana, misy ny “Bino and Fino” – sarimiaina fanabeazana ny ankizy navoaka tamin'ny taona 2010, noforonin'ilay Nizeriana mpanao sarimiaina Adamu Waziri. Mpianadahy ireo mpilalao – Bino sy Fino izay mianatra tantara sy kolontsaina afrikanina miaraka amin'i Zeena, lolo iray mahagaga. Alefa manerana ny firenena 15 amin'ny teny anglisy, Twi, Yoruba, Alemanina, Holandey, Portiogey, Hausa, Igbo, Frantsay ary Swahili ny sarimiaina ary azo jerena ao amin'ny YouTube ihany koa. Sarimiaina iray hafa avy any Nizeria ihany koa ny The Anilingo Series avy amin'ny “IyinCreative” izay mampiroborobo sy mitahiry ny lova ara-kolontsaina afrikana.
Fantaro i Bino sy Fino, mpianadahy mianjoria miaraka amin'ny lolo majika Zeena ary mianatra izay rehetra momba an'i Afrika sy izao tontolo izao! Jereo ao amin'ny https://t.co/xESBCQtYFa ary ao amin'ny fantsona sarimiaina MAIMAIMPOANA Roku amin'ny batteryPOP.
Andian-tsarimiaina hafa ny “Ẹbí Fọ́lọ́runṣọ́” noforonin'i Kayode Oloko, teraka Nizeriana monina any Finland izay mampianatra ny fiteny Yoruba matetika ampiasaina any Nizeria. Manao fanentanana izany mba hampahafantatra ny kolontsaina, ny fomban-drazana, ny fiteny ary ny mombamomba ny ankizy Yoruba rehetra avy any Nizeria. Niresaka momba ny fandraisana andraikitra sy ny aingam-panahy tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Pan-Africa.net izy.
Any Nizeria amin'izao fotoan, betsaka ny ray aman-dreny misafidy ny zanany hiteny anglisy fa tsy ny fitenin-drazany. Zava-misy mampalahelo izany ka mety ho very ny maha-izy azy sy ny tanjon'ny taranaka ho avy, fahavoazana zakaina noho ny fiainana ao amin'ny firenena mpampiantrano.
Avy any Afrika Afovoany, misy ny CMR KIDS TV, fantsom-pahitalavitra iray ao amin'ny YouTube izay mampianatra ny ankizy Kameroney momba ny kolontsainy sy ny tantarany ary koa ireo fiteny toa ny Ewondo sy Dioula.
Any Afrika Atsinanana, sarimiaina iray hafa mendrika homarihina ny Tsehai Loves learning. Misy amin'ny fiteny fito eo an-toerana ny sehatry ny fanabeazana ankizy Etiopiana ary mifantoka amin'ny fanomezana fampahalalana lehibe momba ny fianarana fahaizana mamaky teny sy manoratra, ny fahasalamana, ary ny fianarana ara-tsosialy sy ara-pihetseham-po ho an'ny ankizy tanora.
Any atsimon'i Afrika indray, asongadin'ny Youtube ny seho toa ny hiran'ny Zulu Kids sy ny Xhosa kids. Tsy tahaka ireo firenena afrikanina hafa izay fiteny iray ao an-toerana ihany no ekena ho tenim-pirenena, manana fiteny ofisialy 11 i Afrika atsimo – zanatany ao amin'ny firenena ny 10 amin'ireo .
Satria mitady toerana eo amin'ny latabatry ny sarimiaina manerantany i Afrika, eo an-dalana ho lasa toerana mafana ho an'ny sarimiaina ihany koa izy noho ireo ezaka mitohy hamorona feo sy endrika orizinaly. Saingy mbola tsy tratra ny fanohanana sy ny fangalana izany eo amin'ny governemanta Afrikanina. Araka ny filazan'ny Fikambanana ho an'ny Fampandrosoana ny Fanabeazana any Afrika (ADEA amin'ny teny Anglisy)
Tena ilaina ny firotsahana sy fanohanan'ny governemanta amin'ireo tantara an-tsary sy ny sarimiaina satria ireo no haino aman-jery stratejika hifandraisany amin'ireo taranaka tanora amin'ity taonarivo ity.
Azia Atsinanana 5 ora izay